ဟန်းဂုရွာ: ၁၃ကြိမ်မြောတ် ကျွန်ုပ်တို့လည်း ဘူချွှန်းကို ချစ်ပါတယ် ယဉ်ကျေးမှု ပွဲတော်
၁၃ကြိမ်မြောတ် ကျွန်ုပ်တို့လည်း ဘူချွှန်းကို ချစ်ပါတယ် ယဉ်ကျေးမှု ပွဲတော်
၁၃ကြိမ်မြောတ် နိုင်ငံပေါင်းစုံ ယဉ်ကျေးမူ ( ဘူချွှန်းကို ချစ်ပါတယ် )ပွဲတော်ကို အောက်ပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ချစ်မြန်မာ တိုင်းရင်းသားအပေါင်းတို့ ပါဝင် ပူးပေါင်းကြပါရန် ခင်မင် ရင်းနှီးစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပွဲတော်တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၆ နိုင်ငံက ပါဝင်ကြမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာ ကိုယ်စားပြုအဖြစ် မြန်မာအသင်း (ကိုရီးယား)က မြန်မာအလှ၊ မြန်မာ့အစားအစာ (မုန့်ဟင်းခါး)၊ မြန်မာ့ လက်ရာများဖြင့် ပါဝင် ပူးပေါင်း ဧည့်ခံ ပြသသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
နေ့ရက် ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ ၁၃၇၅ ခုနှစ် သီတင်းကျွတ် လပြည့်ကျော် ၁ ရက်
အချိန် ။ နံနက် ၁၁ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအချိန်အထိ
နေရာ ။ ပူချွန်းမြို့တော် ခန်းမရှေ့ မင်္ဂလာ မြက်ခင်းပြင်
ဦးခင်မောင်ရင် ။ ၀၁၀ ၂၇၈၈ ၇၁၅၃
부천시가 후원하고 부천외국인노동자의집이 주관 하는 제13회 부천다문화축제‘우리도 부천을 사랑해요’가 2013년 10월 20일(일) 부천시청 잔디광장에서 진행됩니다. 많은 분들의 참여와 관심을 부탁드립니다.
1. 일시 : 2013.10.20(일) 11시
2. 장소 : 부천시청 잔디광장
3. 주관 : 부천외국인노동자의집 (사)부천이주민지원센터
4. 후원 : 부천시
◕ 행사 개요와 기대효과 - 다문화사회에 부천지역에 거주하고 있는 많은 이주민들의 문화를 교류하고 다양한 문화들의 화합을 위한 다문화축제 - 한국사회에 적응을 위한 그리고 내외국인간에 지구촌이라는 공동체로 함께 공존하고자 하는 다문화축제 - 다민족, 다문화사회의 진입에 따른 시민사회의 다문화 인권의식의 제고 - 이주민과 부천시민의 만남과 소통의 계기 - 이주민공동체 활성화와 성취감을 고취시킴으로써 이주민들의 자립능력 강화
Posted by ကျော်ဇင် at 5:58 PM
Labels: ဖိတ်စာကြားလွှာ, မောင်းသတင်း